Barlamaanka Hirshabeelle oo doortay madaxweyne iyo ku-xigeen. – Radio Daljir
Barlamaanka Hirshabeelle oo doortay madaxweyne iyo ku-xigeen.
Oktoobar 17, 2016 10:37 b 0
Jowhar, Oct 17 2016-Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa maanta ku guuleystay Doorashada Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle ee Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, isagoo 61 cod kaga guuleystay Musharaxa kale ee la tartamayay Maxamed Cabdi Waare oo helay 36 cod.
Doorashada oo aheyd mid aad isha loogu hayay ayay dad badan horay u sii saadaaliyeen, inuu ku guuleysanayo xilka Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo ahaa Wasiirkii hore ee Waxbarashada dowladdii KMG aheyd ee lagu soo dhisay Mbaghati ee dalka Kenya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta Xildhibaanada, isagoo sheegay in 98 xildhibaan ay codeysay, 61 cod uu helay Cali Cabdullaahi Cosoble, halka 36 cod uu helay Maxamed Cabdi Waare, halka Hal cod uu xumaaday.
Dhanka kalena xilka Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle waxaa u tartamayay Musharaxiinta kala ah Cali C/laahi Xuseen (Guudlaawe) iyo Cali Xasan Hilowle (Cali Taakow).
Madaxweyne ku xigeenka cusub ee Maamulka Hirshabeelle ayaa loo doortay Cali C/laahi Xuseen (Cali Guudlaawe) oo helay 86 cod halka Cali Xasan Hilowle (Cali Taakow) oo la tartamayay uu helay 10 cod.
Daladda PUNSAA oo baaq kasoo saartay xiisadaha magaalada Galkacyo.